Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra azo amidy hotely & vokatra kosmetika - Orinasa famokarana masinina sy vokatra kosmetika any Sina
Milina tsy vita tenona ondana
Izy io dia masinina mandeha ho azy manokana hamokarana tratra ondana tsy misy tenona indray mandeha, ary ny vokatra dia 30 pcs / min. Ampiharina amin'ny fiaramanidina, hopitaly, hotely, ary fahanana fitaovana ho azy io, tsy mila mandeha intsony.
Vidiny: USD60000 / SET
Izy io dia fitaovana manokana hamokarana ho azy tampoka ny lohan-doha tsy misy tenona. Mihatra amin'ny fiaramanidina, lamasinina, bus izany. Avy hatrany dia mamorona sakafo ara-nofo ho an'ny vokatra vita.
Masinina fanaovana fonon-tànana azo ampiasaina amin'ny fonon-tànana mandeha ho azy
Ny rafitra voafefy mifamadika dia ataovy tonga lafatra kokoa ny tombo-kase. Izy io dia mandray ny fampitoviana azota azo ovaina ary mametraka milina kaody fanoratana hafanana, ary azo esorina malalaka ny toerana fanontana. Ny fisehoana dia azo vita amin'ny vy tsy misy fangarony na tsifotra arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Vidiny: USD30000 / SET
Milina fanaovana landihazo vita amin'ny landihazo / fonon-tanana
Ity milina ity dia ampiasaina hanamboarana landihazo sy fonon-tànana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny endrika sy ny habe samihafa ihany no mila manova ny haben'ny bobongolo.
Vidiny: USD20000 / SET
Masinina fanaovana plug-in vita amin'ny landihazo vita amin'ny tanana
Masinina mandeha ho azy izy io. Avy amin'ny akora apetraka amin'ny vokatra vita ny fanapahana sy ny famoahana indray mandeha. Izy io dia afaka mamokatra landihazo tsy vita tenona, sarontava tarehy, insoles, lamba mop, ary koa afaka manamboatra fonon-tànana fanadiovana tsy tenona, ny lasitra ihany no tsy maintsy ovaina.
Masinina fanaovana kiraro fanary azo ampiasaina
Izy io dia masinina manokana hamokatra automatique, tsy misy tenona ary fonony kiraro plastika. Tsy mila miasa amin'ny famokarana. Ny vokatra dia ampiharina amin'ny hopitaly, indostrian'ny harafesina maimaim-poana. Avy hatrany dia mamorona sakafo ara-nofo ho an'ny vokatra vita.
Masinina fanaovana bouffant bouffant azo ampiasaina
Izy io dia fitaovana manokana hanamboarana automatique cap tsy misy tenona miaraka amina output 60-80 pcs / min. Ampiharina amin'ny Hotely, Family, Hopitaly ary indostria tsy misy vovoka.
Masinina fanaovana horonantsary fanaraha-maso solika azo ampiasaina
Ity milina ity dia ampiasaina hanamboarana sarimihetsika fanaraha-maso menaka fanary na taratasy mandray menaka solika ho an'ny hatsarana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny endrika sy ny habe samihafa ihany no mila manova ny haben'ny bobongolo.
Vidiny: USD21000 / SET